Niditra tao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO tany Madrid izao ireo mpitsikilo
Home » Lahatsoratra farany farany » Zon'olombelona » Niditra tao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO tany Madrid izao ireo mpitsikilo
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Novambra 29, 2021
Namaky 11 aho
Ireo solontena avy amin'ny UNWTO nanatrika ny fivoriambe tamin'ny 30 Novambra - 2 Desambra, dia tsy tokony hanantena ny hahita ny logo manga sy fotsy eTN sy ny mpanao gazety eTN mizara karatra fandraharahana, satria voarara amin'ny fomba ofisialy ity famoahana ity.
Naman'i eTurboNews anisan'izany ny governemanta, ny indostria tsy miankina, ary ny tompon'andraikitra amin'ny haino aman-jery dia vonona ny hamoaka vaovao avy amin'ny fivoriambe ho avy any Madrid.
Ny zavatra ho hitan'ireo navela hanatrika ny Fivoriambe tao Madrid dia ny delegasiona lehibe indrindra amin'ny firenena rehetra, ny delegasiona avy amin'ny Repoblikan'i Georgia, vonona ny hanohana ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili amin'ny fanamafisana ny fifidianana.
Tamin'ny May 2017, ity publication ity nitatitra momba ny delegasiona Zeorziana an'ny manampahefana masoivoho miaro ara-batana ny kandidà Zurab Pololikashvili tao amin'ny lobby hotely. ary nandritra ny fizotry ny fifidianana Sekretera jeneraly. Zurab dia hitan'ny an eTurboNews mpanao gazety tsy fantany ary nijoro teo afovoan'ny vondron'ny mpiasan'ny masoivoho Zeorziana. Zurab dia niresaka tamin'ny olona iray tao amin'ny efitrano nivorian'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka hifidy ny Sekretera jeneraly manaraka. Nampiasa ny findainy mifandray amin'ny SKYPE i Zurab mba hanomezana torolalana ho an'ny olona iray ao amin'ity efitrano ity.
Lisitry ny ampahany amin'ny delegasiona Georgia andrasana hanatrika amin'ity herinandro ity:
Ramatoa Ana Gochashvili Lehiben'ny departemanta Fitantanana ny fizahantany Georgia Eny
Andriamatoa Bacho Rusishvili Lehiben'ny Protocole Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fampandrosoana Maharitra an'i Georgia
Ramatoa Helen Mdivani Primera Consejera Embajada de GeorgiaGeorgia
Andriamatoa ILIA GIORGADZE Masoivohon'i Georgia Georgia
Andriamatoa IRAKLI GIGAURI Masoivohon'ny Mpanolotsaina ao Georgia Georgia
Andriamatoa Leri Muradashvili Cameraman Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fampandrosoana Maharitra ao Georgia Georgia
Mr. Luka Mamulaidze Cameraman Georgian Tourism Administration Georgia
Ramatoa Mariam Kvrivishvili Minisitry ny Toekarena sy ny Fampandrosoana Maharitra ao Georgia Georgia
Ramatoa Maya Omiadze Lehiben'ny Departemantan'ny Serasera stratejika Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fampandrosoana Maharitra ao Georgia Georgia
Ramatoa Medea Janiashvili Lefitra Mpisolo toerana Georgian National Tourism Administration Georgia
Ramatoa Natia Turnava Minisitry ny Toekarena sy ny Fampandrosoana Maharitra an'ny Governemanta Georgia Georgia Georgia
Andriamatoa Nikoloz Sabulua mpaka sary Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fampandrosoana Maharitra ao Georgia Georgia
Ramatoa Nino Turmanidze Assistant Embajada de Georgia Georgia
Ramatoa Nino Kiltava Asistente Embajada de Georgia Georgia
Mr. Teimuraz Basilaia Mpanolotsaina Masoivohon'i Georgia Georgia Mr. Zurab
Mchedlishvili Mpanolotsaina ambony ao amin'ny Masoivohon'i Georgia Masoivohon'i Georgia Georgia
Tsy isalasalana, ary fikarohana Google fotsiny, eTurboNews dia mijanona ho fampahalalam-baovao lehibe indrindra eran-tany mitantara ny olan'ny UNWTO, toy ny efa nisy nandritra ny 20 taona. eTurboNews dia nandray anjara mavitrika tamin'ny rafitra UNWTO saingy tsy fantatra mihitsy fa nanao lipservice.
Ny UNWTO dia nampiantranoin'i Espaina, firenena eoropeanina. Teratany EU, anisan'izany ny Alemana eTurboNews tsy mila visa ho an'ny mpanao gazety manokana ny mpanao gazety vao mitatitra avy any Espaina.
Ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety dia zon'ny gazety, gazety, ary zavatra vita pirinty hafa hamoaka vaovao tsy misy fanaraha-maso avy amin'ny governemanta. Ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Espaina, Fanjakana Ampanjaka amin'ny Lalàm-panorenana miaraka amin'ny Demaokrasia Parlemantera, dia azo antoka ao amin'ny fizarana faha-20 amin'ny Lalàm-panorenany nosoratana tamin'ny 1978, taorian'ny didy jadona nataon'ny Jeneraly Francisco Franco izay nifarana tamin'ny 1975. Nozarain'ny World Press Freedom tamin'ny laharan'ny Fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety i Espaina. Faha-29 tamin'ny taona 2017.
Izany angamba no antony eTurboNews amin'izao fotoana izao dia mankafy mpamaky mihoatra ny 2 tapitrisa isaky ny volanah.
Hatramin'ny taona 2018, ny fandrakofana momba ny fitarihan'ny UNWTO nentanin'i Stalin dia nanakiana, ka niteraka eTurboNews voarara amin'ny hetsika an-gazety rehetra tohanan'ny UNWTO.
Ao amin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany any London (WTM) vao haingana ny eTNinia nosakana tsy hiditra ho UNWTO/WTT ampahibemaso ny mpamoaka urboNewsC hetsika. Tsy nahalala an'io fanapahan-kevitry ny UNWTO io ny WTTC.
Marcelo Risi, lehiben'ny serasera ho an'ny World Tourism Organization dia naman'ny eTN teo ambany fitarihan'ny UNWTO teo aloha. eTurboNews Nampiantranoin'ny UNWTO ny mpanao gazety tamin'ny hetsika lehibe rehetra talohan'ny nandraisan'i Zurab.
Norahonana ho very asa izao i Marcelo raha namaly eTurboNews. Izany no antony tsy namaly ny fanontanian'ny haino aman-jery tamin'ity famoahana ity nanomboka ny 1 Janoary 2018.
Toy izany koa no nitranga tamin’i Anita Mendiratta. Nandray anjara lahatsoratra momba ny eTurboNews nandritra ny taona maro, ary nasandratra ho mpanolotsaina ambony ho an'ny Sekretera jeneraly teo aloha Dr. Taleb Rifai.
Nanomboka ny 1 janoary 2018 izy no nandray ny toeran'ny mpanolotsaina ambony amin'ny sekretera jeneraly ankehitriny Zurab Pololikashvili. Angamba ny asany koa dia teo amin'ny laharana raha te hifandray eTurboNews?
Taorian'ny fivoriambe tany Zambia/Zimbabwe tamin'ny 2013, i Anita Mendiratta dia nandrindra ny fiaraha-miasa teo amin'ny eTurboNews, UNWTO, IATA, ICAO, ary CNN amin'ny anarana CNN TASK Group
Tamin'ny famoahana an-gazety 2017, CNN sy eTurboNews Nanaiky: "CNN sy eTN dia mirehareha ny manohy mametraka ny fenitra ho an'ny fahaiza-manao amin'ity vahaolana vaovao lehibe ity, fananganana fiaraha-miasa stratejika maharitra eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana ara-toekarena."
Hoy ny Dr. Taleb Rifai 8 taona lasa izay:
Ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNWTO sy CNN International dia dingana lehibe amin'ny fanasongadinana ny mety ho an'ny dia sy ny fizahantany. Mitombo hatrany ny indostria, mampiasa olona an-tapitrisany, mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany. Amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity, ny toerana dia omena fahafahana hampitombo ny tombony azony amin'ny tsena tena mifaninana amin'ny alàlan'ny fivarotana toerana ho an'ny TASK Group.
Hanohy hiara-hiasa amin'ny CNN ny UNWTO hampandrosoana ny fampiroboroboana ny fizahantany ary hametraka azy ho mpilalao fototra amin'ny fandaharan'asa fampandrosoana eran-tany.
Dr. Taleb Rifai, Sekretera jeneralin'ny UNWTO
Nia Dos Santos, ary Geraldine Finnegan dia hanatrika ny fivoriambe amin'ny anaran'ny CNN sy ny TASK Group mba hisarihana ireo mpanao dokambarotra CNN.
Daniella Wagner avy ao amin'ny Jacobs Media, tompon'ny Travel Weekly dia ho any Madrid hitady fahafahana ara-barotra ho an'ny orinasa mediany. Tsy hahita fehintsoratra manakiana ianao (raha misy) momba ny UNWTO ao amin'ny Travel Weekly.
"Indraindray ny tombontsoa ara-barotra dia lasa faharoa," hoy i Juergen Steinmetz, mpamoaka lahatsoratra eTurboNews "Nanompo tao amin'ny UNWTO Task Group manohitra ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy aho ary nisolo tena ny haino aman-jery manerantany nandritra ny taona maro. Tohina ny rehetra tao anatin’ity vondrona ity rehefa nesorina tamin’ny andro nitondran’ny Sekretera jeneraly vaovao tamin’ny taona 2018 izany”.
“Rehefa hitako ny fiovan'ny fitarihana, ny fanodinkodinana, ny tahotra ny asan'izy ireo izay iainan'ny mpiasan'ny UNWTO isan'andro, ny tatitra momba ny etika vao haingana, ny haino aman-jery rehetra manana feon'ny fieritreretana dia tsy tokony hangina alohan'ny mety hahazoana fidiram-bola. Ny fitsangatsanganana sy ny fizahantany dia zava-dehibe loatra amin'ny sehatry ny indostria, indrindra amin'ny fotoan'ny krizy. ”
Miseho izany eTurboNews Nitoetra tsy tapaka tamin'ny fanakianana ny UNWTO niaraka tamin'ireo fampahalalam-baovao be herim-po vitsivitsy, anisan'izany ny Hosteltur any Espaina.
“Ny fandrahonana hilaza ny marina no antony eTurboNews voarara tsy ho afaka tamin’ny Fivoriambe roa taona lasa izay tany Saint-Pétersbourg, any Rosia. ahon 2019 eTurboNews hoy ny UNWTO, tsy hampangina izany. eTurboNews voarara tamin'ny fihaonambe isam-paritra, filankevitry ny mpanatanteraka, fampitam-baovao, ary hetsika fampisehoana ara-barotra nanomboka ny 1 Janoary 2018.
Ny marina dia mety hahasosotra, saingy eTurboNews dia hanohy handrakotra ny UNWTO amin'ny fotoana tsara sy ratsy, mivantana na ankolaka. Manantena izahay fa hanomboka tsy ho ela indray ny fotoana tsara kokoa.
Ekipa iray an'ny eTurboNews ny namana dia hizara vaovao avy amin'ny UNWTO General Assembly. Afaka mandefa mailaka izay manana fampahalalana [email voaaro] na WhatsApp: +1-808-953-4705
Ankoatra ny CNN sy Travel Weekly, ireto haino aman-jery tsy dia mitsikera ireto dia avela hanatrika ny fivoriambe.
ADAM ALHASSAN Reporter Politika AFRICA PARROT GAZETY ONLINE, RADIO SY TV
ANTHONY FORSON MINISTERAN'NY FAHASALAMANA SY NY kolontsaina federaly
Benjamin BOULY RAMES Coordinateur vidéo Agence France Presse Espagne AFP
Tsodrano Oregbe Asemota Correspondent TELEVISION SY RADIO INDEPENDENT
Henry Blechkan Dailymotion v Independent Newspapers
Cristina Giner mpanao gazety / mpanao gazety EURONEWS
Ekaterina Vorobyeva lehiben'ny masoivohom-baovao Rosiana TASS
Elena Shesternina corresponsal en España RIA Nóvosti (MIA Rossiya Sogodnya)
elie flouty Mpanolotsaina amin'ny haino aman-jery Bahrain Authority for Culture and Antiquities
Emeka Emmanuel Eze Mpanoratra TELEVISION INDEPENDENT SY RADIO
Fausto Triana Corresponsal jefe Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Mavooty_iray Dailymo Independent Newspapers
Fetis Alain Mpanorina JOIE DE VIVRE & ANAO
Uchenna Dailymotion vid Champion Newspapers
FRED AYO CAMERAMAN MINISTERAN'NY FAHASALAMANA SY NY kolontsaina
GERARD LEFEBVRE mpandalina sy tonian-dahatsoratra CLEVERDIS / SAFE
JABIR RAZAK Mpitati-baovao momba ny tontolo iainana AFRICA PARROT GAZETY ONLINE, RADIO SY TV
JOHN Momoh CHAIRMAN/CRO CHANNELS MEDIA GROUP
JOHN HYANATOR ASSISTANT EDITOR AFRICA PARROT GAZETY ONLINE, RADIO ARY TV
Joseph Chinagorom Kalu Correspondent TELEVISION SY RADIO INDEPENDENT
Kenenna Ugochukwu Nwaeze Reporter TELEVISION SY RADIO INDEPENDENT
kouasssi Michel Bernadin KOUADIO tompon'andraikitra amin'ny logistique sy sary voyagesafriq
MANUELA INES GRESSLER mpiara-miasa ivelany Folha de São Paulo // Zero Hora (gazety breziliana)
MATTHEW KOFI ESSAH EDITOR SENIOR AFRICA PARROT GAZETY ONLINE, RADIO ARY TV
Nikolai Mironenko Press Center Federal Agency for Tourism an'ny Federasiona Rosiana
Mifankatiava Dailymotion video Independent Newspapers
Noemi Gragera Journaliste Agence France Presse
Laurent Rakotomamonjy Herin Independent Newspapers
Oluwatobi Momoh Corporate Strategist Channels Television
Onyediaka Antony Dailymo Independent Newspapers
Osawaru Lucky Ohenhen Camera Person TELEVISION INDEPENDENT SY RADIO
Paschal Chukwuemeka Oparaocha Camera Person TELEVISION SY RADIO INDEPENDENT
PAUL AYINDENABA ANAAFO SENIOR CAMARA MAN AFRICA PAROT ONLINE GAZETY, RADIO SY TV
RAMON DE ISEQUILLA Corresponsal en España Portal de América
ROTIMI IJIKANMI MINISTERAN'NY FAHASALAMANA SY NY kolontsaina federaly
SARAH AKOSUA BAIDOO ASSISTANT CAMARA VEHIVAVY AFRIKA PARROT GAZETY ONLINE RADIO SY TV
SOLOMON CHUNG MINISTERAN'NY FAHASALAMANA SY NY kolontsaina federaly
Sopiko Beridze mpanao gazety Imedi TV
Stanislav Zalesov Press Center Federal Agency for Tourism an'ny Federasiona Rosiana
Stanislav Solodkin, Sekretera Federaly momba ny fizahantany ao amin'ny Federasiona Rosiana
STANLEY NWOSU REPORTER MINISTERAN'NY FAHASALAMANA SY NY kolontsaina
Symphorien Tano KOUABILE Talen'ny Content VoyagesAfriq
valery jojishvili cammeraman Imedi TV
Manatrika ny fivoriamben'ny UNWTO ve ianao ary te ho Mpitatitra ny eTurboNews? Mailaka [email voaaro] na tsindrio eto hifandraisa aminay amin'ny telefaona, WhatsApp, SKYPE.